भारतमा रहेका ४२ हजार गोर्खा सैनिकलाई देश बचाउन फिर्ता आउन आह्वा`न – शेयर गरौ ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/भारतमा रहेका ४२ हजार गोर्खा सैनिकलाई देश बचाउन फिर्ता आउन आह्वा`न – शेयर गरौ !
भारतमा रहेका ४२ हजार गोर्खा सैनिकलाई देश बचाउन फिर्ता आउन आह्वा`न – शेयर गरौ !
काठमाडौं। नेपालको भूभागलाई पनि दावी गर्दै आफ्नो बनाउने भारतमा ४२ हजार नेपाली गोर्खा सैनिकको रुपमा भारतको भू-भाग रक्षाको लागि स`कृय छन् । भारतको अन्य मुलुक संग टसल पर्दा ज्या`न गुमाउने नेपाली सैनिक हुन् ।
पछिल्लो समय भारतले नेपालको भू`भाग काला`पानी लगा`यतका क्षेत्र लाई आफ्नो भनेर नयाँ भौ`गोलिक न`क्सा सार्वजनिक गरेको छ । जसका कारण नेपाल भारत बीच सम्ब`न्धमा चि`सो पन आएको छ । राजनी तिक दल र सर्वसा`धारण सबै`ले त्यसको विरोध गरेका छन् ।
प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि भारतलाई नेपाली भूमीवाट आफ्ना सैनिक फिर्ता लैजान सार्व`जनिक अपिल गरिसकेका छन् । प्रधान मन्त्रीको यो भनाईले भारतमा हल चल मच्चा एको छ । प्रधान मन्त्रीले त्यस्तो आह्वा`न गरे लग`त्तै भार`तीय राजदु`त श्याम शरण नेपाल आएका छन् ।
तर उनको भ्रमणलाई गोप्य राखिएको छ । यस अघि पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो तर्फवाट अन्तराष्ट्रिय विज्ञलाई दुत बनाएर नेपाल पठाएका थिए । उनले यहाँका राजनीतिक दलसं ग कुराकानी गरेका छन् । ३ गते देखी पोखरामा नेपाल भारत सीमा सुरक्षा बैठक सुरु भएको र सो बैठकलाई प्रभावित पार्ने मनसायले श्याम शरण नेपाल आएको कुरा सिमा बिज्ञ हेमन्त सेढा`ईले बताएका छन् ।
उनले भारतीय सिमाना रक्षाका लागि तैनाथ ४२ हजार नेपा`लीहरुलाई नेपाल फर्कन आ`ह्वान गरेका छन् । भार`तीय भूमी रक्षाका लागि ज्या’नको वाजी लगाएर लड्ने ४२ हजार सेना अब नेपाली भूमी रक्षा`का लागि फिर्ता आउनुपर्ने उनको भनाई छ ।